အရွက် Springs, Truck ကားအရွက် Springs, Truck ကားခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား - DaDa
Sinotruk howo ရှေ့လက်ဝဲရွက်နွေဦး
ဖောက်သည်ရဲ့ပုံဆွဲသည်နှင့်အညီလည်းမော်တော်ယာဉ်၏ 160 အမျိုးအစားများ, အရွက်နွေဦး၏ 600 မျိုးနှင့်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
BPW, FUWA အမျိုးအစားအဘို့အ semi နောက်တွဲယာဉ်အရွက်စမ်း
စက်ရုံစျေး, တည်ငြိမ်သောထုတ်လုပ်မှု, စိတ်တိုင်းကျသူ Work, အရည်အသွေးနှင့် Delivery အာမခံချက်, အသေးစားအမိန့် Acceped
trailer စက်မှုရပ်ဆိုင်းမှု BPW အမျိုးအစား
ရေစိုခံအမြှေးပါးနှင့်အတူ pallet အပေါ်ထုပ်ပိုး
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘို့သစ်သား Pallet အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပက်ကေ့
မူလအစ၏လျင်မြန်စွာအသေးစိတ် Place: Shandong, တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: DF အာမခံ: 180 နေ့ရက်များ oe NO .: ဒီ Semi-နောက်တွဲယာဉ်အမျိုးအစား: TT, ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားနွေမော်တော်ကားမော်ဒယ်: BPW ရာထူး: နောက်အရွယ်အစား: 18 * 120 မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူအ: အဆိုပါ Semi-နောက်တွဲယာဉ် မော်ဒယ်နံပါတ်: အဆိုပါ semi-နောက်တွဲယာဉ်နွေပစ္စည်း: သံမဏိ Shock ကိုစုပ်ယူအမျိုးအစား: အခြားထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်းထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: 10 တန် / ရွက် Springs ၏လအကျိုးကျေးဇူးများနှုန်းတန်ချိန်ပိုလေးယာဉ်များအဘို့အရွက်စမ်းအသုံးပြုခြင်းကောင်းစွာကြီးမားတဲ့နေရာအပေါ်မှာအလေးချိန် dispensing မှာစံပြဖြစ်တယ်, ကြောင်း သူတို့စွမ်းဆောင်ရည်များမှာရတဲ့အကြောင်းရင်းပါပဲရှင် ...
trailer ရွက်နွေဦး TRA 2726
မူလအစ၏လျင်မြန်စွာအသေးစိတ် Place: Shandong, တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Dadaalloy အာမခံ:3လ oe NO .: TRA 2726 အမျိုးအစား: TT, ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားနွေမော်တော်ကားမော်ဒယ်: Trailer AUTO ရာထူး: နောက်အရွယ်အစား: 20 * 75 ကားစေ Truck ကားမော်ဒယ်အရေအတွက်: TRA 2726 TRA 2726: အရွက် Spring ရွက် Springs ရွက်စမ်း၏အရေးပါမှုယာဉ်ရဲ့ရပ်ဆိုင်းမှုစနစ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကကားကိုသို့မဟုတ်ထရပ်ကား၏တစ်ခုလုံးကိုအလေးချိန်ကိုထောကျပံ့အကူအညီမှ install လုပ်ထားကြပါတယ်။ အရွက်လည်းလမ်းမပေါ်တွင်တာယာရဲ့ချုပ်ကိုင်ထားထိန်းသိမ်းရန်ကူညီရန်နှင့်ထိန်းညှိပေါက် ...
DaDa အလွိုင်း Co. , Ltd, အရွက် Sring ဒီဇိုင်းနှင့်အောင်မှာ Air ကိုခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား, စက်မှုခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားအထူးပြုဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်သည် 15 နှစ်အတွေ့အကြုံကို။ ကျနော်တို့ပြည်တွင်းစျေးကွက်မှအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဥရောပ, မြောက်အမေရိက, တောင်အမေရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အာဖရိကစသည်တို့ကို
သင် sh ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုသိလား ...
Lixin မြို့ Gangcheng ခရိုင်, Jinan ရှန်ဒေါင်း, တရုတ်
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. ပူပြင်းတဲ့ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း Wide Body Car Leaf Spring, Heavy Truck Leaf Spring 52crmnba, Shacman Heavy Truck Parts Front Leaf Spring, Car Leaf Spring,